Helitaanka tababbarka IT ee buuxa ayaa hal mar loo qoondeeyay dhawr kuwa la xushay. Si qof walba loo siiyo fursad uu ku nuugo aqoonta ay adduunka NICT siisa, ayuu Xamid HARABAZAN, oo ah injineer ka shaqeeya nidaamka, wuxuu go'aansaday inuu abuuro Alphorm. Qalabkan e-barashada wuxuu wax ka badelay qeybta tababarka internetka iyadoo la adeegsanayo hababkeeda cusub.
Meel u wada furan dhammaan dadka
Alphorm waa madal wax lagu barto e-barashada oo la bilaabay 2012. Ujeedadiisa waxay ku saleysan tahay xaqiiqda ah inay siiso xubnaheeda tababarka fiidiyowga IT-ga oo ay bixiyaan khubaro ku xeel dheer cilmiga. Barayaasha runta ah, waxay aqoontooda la wadaagaan dhammaan kuwa doonaya inay ku tababaraan IT-ga.
Tababbarka lagu siiyo madluhu waa mid dhammaystiran oo cusub. Waxyaabo kala duwan ayaa loo diyaariyey ardayda. Madalku wuxuu bixiyaa qiimayaal tababar oo soo jiidasho leh si loogu oggolaado dhammaan miisaaniyad (yar, dhexdhexaad ama weyne) in la sameeyo si loo tababaro horumarna laga gaaro.
Hal-ku-dhegga madalku wuxuu si dhammaystiran u soo koobayaa himilooyinkiisa iyo ujeeddooyinkiisa. Loogu talagalay aasaasaha goobta iyo la shaqeeyayaashiisa, waxa ugu muhiimsan ayaa ah in la wadaago qiimahooda iyadoo la faafiyo aqoonta IT. Ka dhigista mid u sahlan qof kasta, ha ahaato qof ama ganacsi, waa himilada ugu weyn ee ay naftooda u dejiyeen.
Goobta e-barashada waa xarun tababar oo la oggol yahay. Shaqaalaha ama shaqo dooneyaasha doonaya inay bartaan IT waxay ciyaari karaan OPCA ama inay maalgeliyaan tababarkooda isticmaalka aalado kaladuwan.
Barashada masaafada oo dhameystiran
Dhammaan kuwa doonaya inay dib ugu soo ceshadaan IT-ga ama kordhiyaan aqoontooda gudaha waxaa lagu soo dhaweynayaa Alphorm. Madalku wuxuu bixiyaa koorsooyin badan oo tababaro ah oo loogu talagalay adduunka NICTs.
Tababbarku waa mid ka mid ah hababka tababarka ee ay isticmaalaan tababarayaasha Alphorm. Tani waxay u tahay si loogu oggolaado bartayaasha inay si dhaqso leh u horumariyaan oo ay si fiican u maareyaan aaladda ay isticmaali doonaan. Tayada farsamada waxaa hubiya qaabkan tababbarka cusub.
Tababbarka xirfadeed ee Alphorm wuxuu kuu oggolaanayaa inaad hesho shahaado kaa caawin doonta horumarinta xirfaddaada xirfadeed. Bilowgayaasha galaya NICT adduunka markii ugu horeysay waxay awood u yeelan doonaan inay is-dhex-geliyaan aasaaska aasaasiga ah ee IT.
Kuwa doonaya inay hantaan shabakadaha bulshada iyagoo ujeedkoodu yahay inay horumariyaan waxqabadyadooda waxay raaci karaan koorso tababar ah oo loogu talagalay farshaxanka muuqaalka ee qaybtan. Waxa kale oo aad barataa fiidiyowyo kaa caawin doona inaad ka gudubto imtixaannadaada 100-101. Qaar kale ayaa kaa caawin doona inaad hesho shahaadada CCNA, LPIC-1 ama xitaa 1Z0-052.
Goob loo habeeyey dhammaan warbaahinta
Alphorm ujeedadiisu waa inay ahaato mid hal abuur leh oo hufan. Sababtaas awgeed, goobta ayaa loo habeeyay si ay u noqoto mid laga heli karo warbaahinta kala duwan. Xubnaha madalku waxay raaci karaan tababarka goob kasta. Nooca mobilada waxaa laga heli karaa kiniiniyada iyo taleefannada gacanta ee ka shaqeeya Android iyo macruufka.
Goobtu waxay u furan tahay caalamka si ay fursad ugu siiso dhammaan kuwa doonaya inay galaan adduunyada NICTs si ay si bilaash ah ugu tababaraan. Barteyaasha si taxaddar leh ayey ula socon karaan.
Iyadoo aan loo eegin celceliska la istcimaalo, menu ikpogu weli waa isku mid. Adoo raacaya koorso tababar, xubnaha kombuyuutarku waxay dooran karaan xalka fiidiyaha ee sida ugu fiican u habboon. Iyaga oo daawanaya tababarka, waxay sidoo kale hortooda ku lahaan doonaan qorshaha koorsada (isla interface-ka).
Codsiga Alphorm wuxuu leeyahay adeeg u oggolaanaya bartaha inuu soo saaro liiska koorsooyinka. Taasi waxay u tahay si uu si wanaagsan ugu maareyn karo sidoo kale si uu u arko horumarkiisa xagga tababarka.
Qiimaha iyo rukumada
Si qof walbaa uga faa iideysto tababarka ay khabiiradu soo bandhigeen, Alphorm wuxuu dejiyay jadwal qiimo leh oo ku habboon dhammaan waraaqaha. Madalku wuxuu bixiyaa marin u helista buugga tababarka oo dhan, laakiin sidoo kale waa suurtagal in la bixiyo kharashka tababarka cutubka.
Si aad u hesho dhammaan buug-yaraha ay ku bixiso barxadda, waxaad dooran kartaa rukunka billaha ah ee 25 €. Dhammaan waxyaabaha ay madashu bixiso waxay kuu furnaan doonaan muddo dhan 30 maalmood. Waxaad sidoo kale awood u yeelan doontaa inaad adeegsato nooca mobilada ee barta oo aad marin u hesho taageerada PPT. Iyo dhamaadka tababarkaaga shaqo, waxaad heli doontaa shahaado.
Waxa kale oo aad haysataa rukunka sanadlaha ah ee 228 € oo aad ku bixin karto hal mar ama laba bil bishii qiimaha 19 €. Waqtigaan, muddada helitaankaaga waxyaabaha ku jira tababarka waxay noqon doontaa 365 maalmood. Marka lagu daro mudnaanta rukunka billaha ah, waxaad ku raaxeysan doontaa xalalka maalgelinta, marinka khadka tooska ah iyo sidoo kale helitaanka ilaha mashruuca.
Haddii kale, waxaad dooran kartaa inaad bixiso kharashka tababarkaaga shaqsi ahaan. Qiimuhu wuu ka duwanaan doonaa 9 ilaa 186 €. Adiga oo bixinaya kharashka tababarka, marin u helka waxa ku jira waxay noqon doontaa nolosha. Waxaad ka faa'iideysan doontaa isla faa'iidooyinka sida rukunka sannadlaha ah. Iyada oo ay ku kala duwan yihiin inaadan fursad u helin xalalka maalgelinta.
Alphorm, IT tababarka ayaa hadda laga heli karaa khadka tooska ah 25-Abriil, 2020Tranquillus
horeWaxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato xannibidda
socdaSmartnskilled: goobta tababarka khadka tooska ah ee kulmaan dhammaan baahiyaha